Google's Project Zero inoderedza vashandisi uye vashanduri | Linux Vakapindwa muropa
Google nemitemo yayo inogona kuita senge isu. Asi kana paine chimwe chinhu chandinofunga chakanyanya kupokana, chaive chake Chirongwa Zero, timu inoongorora marudzi ese esoftware kuti iwane zvikanganiso. Dambudziko reprojekti iyi raisave rekuti rakaferefeta, asi kuti rakaisa kumanikidza kumakambani kugadzirisa madhigi nekuaburitsa iwo nekukasira. Asi kana iwe waona, isu tiri kutaura mune yakapfuura nguva.
Google atumira kuti mutemo wako mutsva uchave wakadii. Kusvika parizvino, kambani yemutsvagi mukuru, rega ndishandise chirevo, vakaita "chero chavaida", icho chaimbo dudzira mukutsvaga mhosva (ahem, kubva kukambani inokwikwidza, kwete sevamwe vakaita izvi kuti vanovhara), ivo vakazivisa iyo kune vanofarira bato uye vakaburitsa iyo data rese mune imwe nyaya yemaawa kana mazuva. Kubva zvino zvichienda mberi vachapa mwedzi mitatu, kana 90 mazuva kuti ive chaiyo, saka vagadziri vane nguva yekugadzirisa dambudziko. Mushure menguva iyoyo yenguva, ivo vachaburitsa zvese izvo.
Project Zero zorora
Chete muchiitiko chekuti makambani maviri (Google neanogadzira software) vasvike pachibvumirano, ruzivo rwuchazoburitswa pamberi pemazuva makumi mapfumbamwe ataurwa. Kana pasina chibvumirano, hazvina basa kana kutadza kwacho kuchigadziriswa mu90, 1 kana 20 mazuva; Google inotumira zvinyorwa mushure memwedzi mitatu.
Project Zero inodaro vamwe vanogadzira vakaonana navo kuti vakumbire yakatowanda nguva, nekuti mwedzi mitatu inogona kunge isingakwani, asi Google inofunga kuti haina basa. Uye zvakare, kumhanyisa kuchavakurudzira kuti vagadzire madhiragi akawanikwa, zvinozorevawo kuti matambudziko ekuchengetedza anogadziriswa vasati vawana rinotevera.
Ini pachangu, ndinofunga idzi inyaya dzakanaka kune wese munhu. Icho chaive chiratidzo chakashata kwazvo kutsvaga bug uye kuiburitsa munguva pfupi, nekuti ivo chete kana vakanyanya kubatwa vaive vashandisi avo isu takanga tichitanga kushandisa software neinenge imwechete kushupika kwevanhu. Shanduko ichaitwa mugore ratichangopinda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Google's Project Zero ichatsamwisa vashandisi uye vanogadzira zvishoma: ichapa yakawanda margin